Murdoch Nipao-tsatroka An’i Singapore Ho Modely Nefa Mandà Izany Ireo Mponin’ny Aterineto Ao An-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2011 14:51 GMT
Nandritra ny fitsaràna ampahibemaso ny raharaha tsy elaakory izay momba fihainoana an-tsokosoko ny antso an-telefaonina mahavoarohirohy ny gazety avoakany, News of the World, Rupert Murdoch, tomponà trano fampielezam-baovao dia nilaza tamin'ireo mpikambana ao amin'ny parlemantera Britanika fa tokony halain-tahaka ny modelin'i Singapore amin'ny fandoavana karama ambony be ho an'ireo politisiana ho fanenana ny kolikoly :
Ho fampitàhàna, ny praiminisitra ao UK David Cameron dia mikarama S$279,000 isan-taona raha ny an'ny praiministra ao Singapore Lee Hsien Loong mandray S$3.87 tapitrisa isan-taona.
Nefa tokony hampahatsiahivina an'i Murdoch fa ny rafitra fandoavanany karama ao Singapore izay nandrandrainy dia andalam-pandinihana ankehitriny taorian'ny nampanjary azy io ho lohahevitra anaty fifidianana volana vitsy izay. Raha ny marina, ny vahoaka no mitaky fiovàna, indrindra fa ho an'ireo avy amin'ny sampan-draharaha tsy miankina, izay mandika karama ben'ireo olona voafidim-bahoaka ho tsy rariny, tsy mahomby ary tsy rariny.
Rehefa nampakatra anaty lahatsoratra ilay fanambaran'i Murdoch tao amin'ny Facebook ny The Online Citizen , dia vetivety foana izany dia niteraka valinteny maro be :
Gregg Chen : izany ka fampihomehezana avy amin'ny mpijirika telefaonina
Janson Choo : Ny tena marina, ireo minisitra aty amintsika ireo dia tena tsy andairan'ny kolikoly. Fa misy ireo sasany tena heverina ho tsy mahavita azy.
Lawrence Pek U : mila manontany raha mahafantatra Murdoch fa ny PAP (antoko eo amin'ny fitondrana) dia very vato betsaka tamin'ny fifidianana izay ho karaman'ny Minisitra? Misy famerenana mandinika an'izany miala any hoe ? Hoe manohitra izany daholo ny vahoaka ao Singapore?:-)
Anne KoArt : Manao tsilian-tsofina momba ny kolikoly ara-dalàna ve i Rupert Murdoch? :O
Ooi Kim Soon : Mampihomehy izany. Tsy misy irika hijirihana eto satria ireo alika kely no mibaiko ny zava-drehetra.
Jon Zephanius : Mihevitra aho fa aorian'io dia hanomboka ny hitady ny zom-pirenen'ny olona ao Singapore izy.
Salihin Nihilas : Tsy mahagaga, Murdoch sy ny olona mpanan-karena dia mankafy ny trano fandroana ao Singapore satria manohana azy ireo ny Governemanta. Tsisy grevy, tsisy sendikà tsy miankina. Mora amin'ireo ny manindry ny karama.
Wil Wilkins : ny mampihomehy, raha tonga tao Singapore i Murdoch dia mety ho voasakan’ ny Lalàn'ny Fanaovan-gazety sy ny Fanontàna Gazety izy.
My Singapore News, na “Ny Vaovaoko Ao Singapore“, na izany aza, dia niombon-kevitra tamin'i Murdoch:
Hevitra maro avy ao amin'ny vohikala The Online Citizen ; manohina ny hevitr'i Murdoch i Americano :…
Jonathan Wang nihevitra fa diso i Murdoch raha nanonona an'i Singapore :…
@marvelgal : nilaza i Rupert Murdoch fa tsara ny fanakaramana an-tapitrisany ny minisitra ao Singapore mba hialàna amin'ny kolilkoly. Ieee marina, azo antoka aloha ny teny hatramin'ny anio.
@followLin: Adabohy any ny resaka karaman'ny ministra @tocsg: Rupert Murdoch : tokony hàka tàhaka ny Karama An-Tapitrisa Dolaran'ny Ministra ao Singapore i UK http://t.co/H1nARDM
@mediumshawn : mihevitra i Rupert Murdoch fa zavatra tsara ny ny fanakaramàna be ny minisitra ao Singapore. Fetaho mofomamy ny tavany azafady. #hackgate #notw